Warar Is Khilaafsan oo ka soo Baxaya Shirka Maamul u Samaynta Jubbooyinka oo la Filayo inuu Maanta ka Furmo Magaalada Kismaayo – idalenews.com
Iyadoo maalmihii u danbeeyay Magaala Xeebeedka Kismaayo ee Magaala Madaxda Gobolka Jubada Hoose ay ka soconayeen qaban qaabada Shirka maamul u Sameynta Gobolada Jubbooyinka ayaa warar is Khilaafsan xiligan waxa ay ka soo baxayaan Shirka Maanta la Filayo inuu ka Furmo halkaas.
Xildhibaan cabdirashiid xiddig oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsanan Barlamaanka Federaalka Soomaalaiya oo iminka ku sugan magaalada Kismaayo oo war baahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in shirkaasu manta si rasmi ah uu halkaa uga furmayo.
Xildhibanaaka ayaa sheegay in gebi ahaanba Ergadii shirka ka qayb gali lahayd iyo Urur Goboleedka Igadba ay halkaa joogaan isla markaana ay ma’uuliyiin ka tirsan Dawladduna ay goobta ku sugan yihiin.
Xildhibaanka ayaan wax shaki ah gelin furitaanka Shirka ee magaalada Kismaayo isagoona hoosta ka xarriiqay in wax waliba sidii loogu tala galay ay u soconayaan xiligan.
Xildhibaan Daahir Jeesow oo isaguna ka mid ah Xildhibaanada ka soo jeeda Goboladaas oo war baahinta Muqdisho kula hadlay ayaa sheegay in uusan shirku manta furmeyn cid ka socota Wasaaradda arrimaha Gudaha ee Xukuumadana aysan jirin maadaama aysan taasi jirina uusan shirku suurta gal ahayn in Maanta uu halkaa ka bilowdo.
Xildhibaanka ayaa tilmaamay inuusan waxba ka qabin isla markaana uu taageersan yahay in Maamul loo sameeyo Goboladaas hase yeeshee ay wax walba ka wanaagsan yihiin inaan lagu deg deign waa siduu hadalka u dhigaye.
Jeesoow ayaa intaa raaciyay in shakhsiyan uusan isagu ka soo hor jeedin Maamul u sameynta Goboladaas wuxuuse ku dooday inaan weli ergadii loogu tala galay in ay shirkaas ka qayb galaan oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Xukuumadda federaalka Soomaaliya aysan meesha wada tegin.
Waxaa Maalmihii u danbeeyay magaalada kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose ku sii qul qulayay Ergada ka qayb galaysa Shirka Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka kuwaas oo qaarkood ay ka imaanayeen dalalka dibadda.
Isku soo duubo waxaa ka go’an dadka degaanka in ay samaytaan maamul ay iyagu soo dhistaan si magaalada Kismaayo iyo Gobolada kale ee Maamulka Jubba land ay wadaagayaan ay uga baxaan is hays haysigii muddooyinkii u danbeeyayba ka jiray Gobolka Jubada Hoose.